वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहका बेथिति : प्रिस्टाइनले नि : शुल्क समयमा मनोमानी गरेको आरोप
कात्तिक १४, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालकले आयातित कार्गोलाई दिइने निःशुल्क समयमा मनोमानी गरेको आरोप आयातकर्ताले लगाएका छन् ।
यो समयभित्र लैजान नसके व्यवसायीले प्रतिमेट्रिकटन रू. ७५ का दरले जरीवाना बुझाउनु पर्दछ । २ हजार ५ ०० मेट्रिकटनको एक र्‍याक कार्गोमा आयातकर्ताले प्रिस्टाइनलाई दिनकै रू. १ लाख ८७ हजार ५०० बुझाउनु पर्दछ । बिदाको समयमा जरीवानाले आयातकर्तालाई अप्ठेरो परेको भए समाधानका लागि आफूहरू तयार रहेको प्रिस्टाइनका मुख्य अधिकृत आदित्य रायले आर्थिक अभियानलाई बताए ।
‘दसैंको बिदाका कारण मालसामान लैजान नसक्दा जरीवानाले भार परेको छ भने हामी सहुलियत दिन तयार छौं,सरोकारका व्यवसायीले त्यसको जानकारी हामीलाई दिनुपर्‍यो,’ रायले आर्थिक अभियानसित भने ।
कन्टेनर कार्गोमा प्रतिकन्टेनर दैनिक रू. ३५० र फलाममा प्रतिमेट्रिकटन रू. ७५ विलम्ब शुल्क लिने गरिएको छ । निःशुल्क समयको सहुलियत र जरीवानाको दर नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिसँग भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्धारण गरिएको बन्दगाह सञ्चालकको भनाइ छ ।